40 askari oo la sheegay in laga dilay AMISOM - BBC Somali
40 askari oo la sheegay in laga dilay AMISOM
4 Maarso 2011
Image caption Dagaalyahannada Al Shabaab ee Soomaaliya
Dagaalladii ugu dambeeyay ee dhowaan magaalada Muqdisho ku dhexmaray ciidammada Midowga Afrika ee taageeraya dowladda kumeelgaarka ee Soomaaliya iyo dhaqdhaqaaqa Al Shabaab, kaddib Al Shabaab waxay sheegeen inay hayaan meydka 18 askari oo u dhashay dalka Burundi. Dowladda Burundi waxay hore u qiratay in lix askari kaga dhinteen dagaalkii ugu dambeeyay hase ahaatee waxaa jira tuhun an in askarta laga dilay ay intaas aad uga badan tahay.
Afhayeen u hadlay kooxda islaamiga xagjirka ee Al Shabaab waxaa uu BBCda u sheegay inay meydadka18-kaas askari ku hayaan meel aanay magacaabin. Ciidanka nabad ilaalinta ee Midowga Afrika ee ka socda dalalka Burundi iyo Uganda waxay dhul ka qabsadeen Al Shabaab laakiin waxay u muuqataa inay taasi ugu kacday khasaare ka badan inta ay qiranayaan.
War laga helay Qaramada Midoobay waxaa uu sheegay in 30 askari oo reer Burundi ah la dilay iyo weliba 10 reer Uganda ah, daraasiin kale oo nabad ilaaiyeyaasha ka mid ahna la dhaawacay. Afhayeennada labada ciidan way ka gaabinayeen inay sheegaan tirada askarta laga dilay waxayse xoogga saarayeen dhulka ay qabsadeen. Si kastaba ha ahaatee arrimaha qarsoodiga ah ee ku wareegsan waxyaabaha Muqdisho ka dhacaya waxay sii adkaynaysaa in la sheego guusha uu gaarayo hawl galka Midowga Afrika.